Ukukhula kwenani labemi basezidolophini kubone umsantsa omkhulu owenziweyo phakathi kwemveliso yeFresh Fresh efikelela kumthengi ngexesha kunye nomgangatho olungileyo.
Kananjalo notshintsho kwindlela yokutya yabemi basezidolophini ukuya ekutyeni nakwiziselo ezibonisiweyo, lubone inyani enkulu kwiShishini lokuLungisa ukutya, ukugcina imigangatho ephezulu yokuthembeka kunye noMgangatho.
Amandla naManzi angamandla aphambili kushishino lokutya kunye neziselo ngokuqhubekekayo ibeka uxinzelelo ekufumaneni nasekusunguleni itekhnoloji ephezulu engazukugcina amandla kunye namanzi kuphela kodwa iya kugcina amaxabiso kwinqanaba elamkelekileyo.
Kukho umdyarho wehlabathi phakathi kweenkampani ezikwishishini lokutya neziselo kwaye banoxanduva lokufumana izisombululo ezizinzileyo emsebenzini wabo. Ngenxa yoko, iinzame ezenziweyo zokuqinisekisa umgangatho, ukusebenza ngokukuko kunye nokuthembeka kufuneka zinxibelelane kakuhle.
I-SPL ibonelela ngeMveliso yokuGcina amandla njenge-evaporative Condenser, i-Hybrid Cooler kunye neemodyuli zokupholisa iimodyuli njengezona zinto ziphambili kushishino lokutya kunye neziselo-ukusukela kwizisombululo ezisemgangathweni kakhulu yonke indlela yokuphunyezwa komntu ngamnye. Naphi na apho ukufudumeza okanye ukupholisa kubandakanyeka khona, uyakufumana isisombululo esidibeneyo kuthi-esiza kuthi sithathele ingqalelo hayi umdla wakho kuphela, kodwa nalawo wabathengi bakho. Singamaqabane akho athembekileyo kuyo yonke inkqubo eyongeziweyo enexabiso.